မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့ တောင် အာရှမှာ မီတာခ ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်နေ...! - Thadin
HomeNEWSမြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့ တောင် အာရှမှာ မီတာခ ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်နေ…!
May 16, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့ တောင် အာရှမှာ မီတာခ ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်နေ…!
အင်အယ်ဒီ အစိုးရမှ တိုင်းပြည်၏ တိုးတက် မြင့်မား လာနေသော လျပ်စစ်စွမ်းအင် လိုအပ်မှု ကို ထေမိစေရန် နောက် လာမည့် နှစ်နှစ် အတွင်း မီဂါဝပ် တထောင် ကို တရုတ်နိူင်ငံ မှ ၀ယ်ယူ ဖြည့်တင်းသွားမည်ဟု မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် လျပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦးက ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို ၂၀၁၇ နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်က စတင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ် ပြည်တောင်ပိုင်း Guangzhou ပြည်နယ်ရှိ အစိုးရပိုင် China Southern Power Grid (CSPG) မှ ၀ယ်ယူတင်သွင်း သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ယူနန် ရှိ Dhong Dai မှ ဗို့အားမြင့် လျပ်စစ်ဓါတ်ကြိုး လိုင်းများ သွယ်တန်းပြီး မိတ္ထီလာမှတဆင့် မူဆယ်၊ မိုင်ရယ်၊ ဟိုပုန်း၊ လွိုင်ကော် နဲ့ ပဲခူးတိုင်း ရှိ ဘုရားကြီး ဒေသများသို့ ဖြန့်ဖြူးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ CSPG သည် ဗီယက်နမ်၊ လာအို၊ ဟောင်ကောင်၊ မကာအို တို့သို့လည်း လျပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးပေးလျက် ရှိနေပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့် နွေရာသီ အတွင်း ပြင်းထန်တဲ့ အပူလှိုင်း ကြောင့် ဆည်ရေများ ခမ်းခြောက်ခဲ့သဖြင့် နိူင်ငံတ၀ှမ်း လျပ်စစ်ဓါတ်အား တွေ ပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ လျပ်စစ် နှင့် စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဌာန ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ဧပြီလ အတွင်း မီဂါဝတ် ၄၀၀ ခန့် လိုအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထို့အပြင် တိုင်းပြည် လူဦးရေ၏ ၄၄% သာ လျပ်စစ်ဓါတ်အား သွယ်တန်းပေးနိူင်ဆဲ ဖြစ်တယ်လို့လည်း လျပ်စစ် ဒုဝန်ကြီး ဦးထွန်းနိူင်ရဲ့ လွှတ်တော် အမေးအဖြေက တဆင့် သိခဲ့ရပါတယ်။
လက်ရှိ အကောင်အထည် ဖေါ်နေတဲ့ နိူင်ငံတ၀ှမ်း လျပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေး စီမံချက် National Electrification Plan (NEP) ၏ တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့က ကုမ္ပဏီ ၆ ခု နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း၊ ကရင် နှင့် မွန်ပြည်နယ်များရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၅၉၀ အတွက် ဓါတ်အားပေးလိုင်းများ နဲ့ မီးအား မြှင့်စက်များ တပ်ဆင်ပေးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်ရဲ့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကို ယခုနှစ်မကုန်ခင်မှာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားတဲ့အကြောင်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မကွေးတိုင်း မြို့တော်ခန်းမမှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူထုတွေ့ဆုံပွဲအတွင်း အဖွင့်မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိူင်ငံ လျပ်စစ်ပမာဏ ရဲ့ ၇၄.၇% သည် ရေအားလျပ်စစ်မှ ရရှိပြီး ၂၀.၅% အား သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှ ထုတ်လုပ်ပြီး ကျန် ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ ကျောက်မီးသွေး နဲ့ ရေနံတို့မှ ထုတ်လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရ အနေနဲ့ကလည်း လူထု ရဲ့ ၀င်ငွေ အနေအထားကြောင့် တိုးကောက်လို့ မရပဲ လျပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး ကို လက်ရှိ အနေအထား နဲ့ တင်းခံနေရပါတယ်၊ ဒီငွေတွေနဲ့သာ လျပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများ တည်ဆောက်၊ လည်ပါတ်၊ မွမ်းမံ ခြင်းအပြင်း ဓါတ်အားပေးလိုင်းများ တိုးချဲ့ သွယ်တန်းသွားရေး တွေ လုပ်နိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ချ ယုံကြည်ရတဲ့ လျပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိနေမှသာ ပြည်ပ ရင်းနှီမြုပ်နှံမှုတွေ ဒလဟော ၀င်လာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကတော့ ရတဲ့ ၀င်ငွေ နဲ့ပဲ မနည်းလည် ပါတ်အောင် လုပ်နေရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ကတော့ တယူနစ်ကို ကျပ် ၁၁၀ ပေးနိူင်မယ်ဆိုရင် မီးမပြတ်အောင် လုပ်ပေးနိူင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ တွေ ရှိနေပြီလို့ ပြောသံလည်း ကြားလိုက်ရပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံဟာ အရှတေ့ောငျ အာရှမှာ မီတာခ ဈေးအသကျသာဆုံးဖွဈနေ
အငျအယျဒီ အစိုးရမှ တိုငျးပွညျ၏ တိုးတကျ မွငျ့မား လာနသေော လပျြစဈစှမျးအငျ လိုအပျမှု ကို ထမေိစရေနျ နောကျ လာမညျ့ နှဈနှဈ အတှငျး မီဂါဝပျ တထောငျ ကို တရုတျနိူငျငံ မှ ဝယျယူ ဖွညျ့တငျးသှားမညျဟု မနကေ့ ပွုလုပျတဲ့ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲတှငျ လပျြစဈ နှငျ့ စှမျးအငျ ဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျး အတှငျးဝနျ ဦးတငျမောငျဦးက ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ အစီအစဉျကို ၂၀၁၇ နှဈလယျပိုငျးလောကျက စတငျ ဆှေးနှေးခဲ့ပွီး သုတသေန ပွုလုပျခဲ့ကွတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
တရုတျ ပွညျတောငျပိုငျး Guangzhou ပွညျနယျရှိ အစိုးရပိုငျ China Southern Power Grid (CSPG) မှ ဝယျယူတငျသှငျး သှားမှာ ဖွဈပွီး ယူနနျ ရှိ Dhong Dai မှ ဗို့အားမွငျ့ လပျြစဈဓါတျကွိုး လိုငျးမြား သှယျတနျးပွီး မိတ်ထီလာမှတဆငျ့ မူဆယျ၊ မိုငျရယျ၊ ဟိုပုနျး၊ လှိုငျကျော နဲ့ ပဲခူးတိုငျး ရှိ ဘုရားကွီး ဒသေမြားသို့ ဖွနျ့ဖွူးသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ CSPG သညျ ဗီယကျနမျ၊ လာအို၊ ဟောငျကောငျ၊ မကာအို တို့သို့လညျး လပျြစဈဓါတျအား ဖွနျ့ဖွူးပေးလကျြ ရှိနပေါတယျ။
ပွီးခဲ့သညျ့ နှရောသီ အတှငျး ပွငျးထနျတဲ့ အပူလှိုငျး ကွောငျ့ ဆညျရမြေား ခမျးခွောကျခဲ့သဖွငျ့ နိူငျငံတဝှမျး လပျြစဈဓါတျအား တှေ ပွတျတောကျသှားခဲ့ရပါတယျ။ လပျြစဈ နှငျ့ စှမျးအငျ ဝနျကွီးဌာန ၏ ခနျ့မှနျးခကျြအရ ဧပွီလ အတှငျး မီဂါဝတျ ၄၀၀ ခနျ့ လိုအပျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ထို့အပွငျ တိုငျးပွညျ လူဦးရေ၏ ၄၄% သာ လပျြစဈဓါတျအား သှယျတနျးပေးနိူငျဆဲ ဖွဈတယျလို့လညျး လပျြစဈ ဒုဝနျကွီး ဦးထှနျးနိူငျရဲ့ လှတျတျော အမေးအဖွကေ တဆငျ့ သိခဲ့ရပါတယျ။
လကျရှိ အကောငျအထညျ ဖျေါနတေဲ့ နိူငျငံတဝှမျး လပျြစဈဓါတျအား ရရှိရေး စီမံခကျြ National Electrification Plan (NEP) ၏ တစိတျတပိုငျး အဖွဈ ဧပွီလ ၃၀ ရကျနကေ့ ကုမ်ပဏီ ၆ ခု နဲ့ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့ပွီး ရနျကုနျ၊ စဈကိုငျး၊ မန်တလေး၊ ရခိုငျ၊ ရှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး၊ ကရငျ နှငျ့ မှနျပွညျနယျမြားရှိ ကြေးရှာပေါငျး ၅၉၀ အတှကျ ဓါတျအားပေးလိုငျးမြား နဲ့ မီးအား မွှငျ့စကျမြား တပျဆငျပေးသှားဖို့ ရှိနပေါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံလြှပျစဈဓာတျအား လိုအပျခကျြရဲ့ ငါးဆယျရာခိုငျနှုနျးကို ယခုနှဈမကုနျခငျမှာ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျဖို့ မြှျောမှနျးထားတဲ့အကွောငျး နိုငျငံတျောရဲ့ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက မကှေးတိုငျး မွို့တျောခနျးမမှာ ပွုလုပျတဲ့ လူထုတှဆေုံ့ပှဲအတှငျး အဖှငျ့မိနျ့ခှနျးမှာ ထညျ့သှငျးပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
မွနျမာနိူငျငံ လပျြစဈပမာဏ ရဲ့ ၇၄.၇% သညျ ရအေားလပျြစဈမှ ရရှိပွီး ၂၀.၅% အား သဘာဝဓါတျငှမှေ့ ထုတျလုပျပွီး ကနျြ ရာခိုငျနှုနျးကိုတော့ ကြောကျမီးသှေး နဲ့ ရနေံတို့မှ ထုတျလုပျနတော ဖွဈပါတယျ။
သူငယျခငျြးတယောကျ တနကေ့ တှကျခကျြ တငျပွခကျြအရ လပျြစဈမီး မှနျးခွေ တယူနဈ တှငျ
အစိုးရ အနနေဲ့ကလညျး လူထု ရဲ့ ဝငျငှေ အနအေထားကွောငျ့ တိုးကောကျလို့ မရပဲ လပျြစဈဓါတျအား ဖွနျ့ဖွူးရေး ကို လကျရှိ အနအေထား နဲ့ တငျးခံနရေပါတယျ၊ ဒီငှတှေနေဲ့သာ လပျြစဈဓါတျအားပေးစကျရုံမြား တညျဆောကျ၊ လညျပါတျ၊ မှမျးမံ ခွငျးအပွငျး ဓါတျအားပေးလိုငျးမြား တိုးခြဲ့ သှယျတနျးသှားရေး တှေ လုပျနိူငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
စိတျခြ ယုံကွညျရတဲ့ လပျြစဈဓါတျအား ရရှိနမှေသာ ပွညျပ ရငျးနှီမွုပျနှံမှုတှေ ဒလဟော ဝငျလာမှာလညျး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိကတော့ ရတဲ့ ဝငျငှေ နဲ့ပဲ မနညျးလညျ ပါတျအောငျ လုပျနရေပါတယျ။ ရနျကုနျတိုငျး ဝနျကွီးခြုပျကတော့ တယူနဈကို ကပျြ ၁၁၀ ပေးနိူငျမယျဆိုရငျ မီးမပွတျအောငျ လုပျပေးနိူငျတဲ့ ဝနျဆောငျမှု ကုမ်ပဏီ တှေ ရှိနပွေီလို့ ပွောသံလညျး ကွားလိုကျရပါတယျ။
This Month : 38202
This Year : 233600
Total Users : 592624
Total views : 2719430